Is Zimbabwe's President Facing Internal Party Rebellion? - allAfrica.com
Following President Emmerson Mnangagwa's call for an early election, amid suggestions that he hoped to capitalise on opposition disarray, reports have indicated that he could face internal revolt within his own Zanu-PF party, with many of the ruling party legislators reportedly calling for elections to be postponed by at least three years. This will be the first time since independence the southern African country will conduct a poll that does not involve former president Robert Mugabe.
President Emmerson Mnangagwa faces internal revolt over early elections after it emerged his calls for polls to go ahead as early as August could be resisted by his own Zanu PF… Read more »
New Zimbabwe, 21 January 2018
Exiled former Zanu PF national commissar, Saviour Kasukuwere, is begging President Emmerson Mnangagwa to be allowed back into the country, a Zanu PF official has claimed. Read more »
MOST opposition parties in Zimbabwe appear to be torn by divisions raising fears that they may not perform well in the forthcoming general elections. Read more »
President Emmerson Mnangagwa wrote to then President Robert Mugabe pledging his undying loyalty to him soon after his November dismissal as Vice President, when in fact seemed to… Read more »
Zimbabwe's Constitution requires it to hold elections by July 2018. It seems unlikely that the country's political system will be reformed in time to ensure the election is free ... Read more »
Zimbabwe: Opposition 'Takes Mugabe to Court' - Report